Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda Midowga Yurub oo kasoo horj... | Universal Somali TV
Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda Midowga Yurub oo kasoo horjeesatay go'aanka madaxweynaha Maraykanka ee aqoonsiga al-Qudus.
Midowga Yurub ayaa u xaqiijiyay Madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas in 28-dal ee wadamada midowga ay taageerayaan dalabkii Falastiiniyiinta ee ah in ay u aqoonsadaan ​​bariga al-Qudus caasimadooda mustaqbalka.
Intii lagu guda jiray kulan lala yeeshay Abbas ee xarunta Midowga Yurub ee Brussels, Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Federica Mogherini ayaa kasoo horjeesatay go'aanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ah inuu aqoonsado al-Qudus caasimadda Israel.
"Waxaan rabaa inaan u xaqiijino madaxweyne Abbas ballan-qaadka Midowga Yurub in xal loo helo laba-dawladood oo al-Qudus ay tahay caasimadda la wadaago ee labada dawladood," ayay sheegtay Mogherini.
Mogherini, oo tixraacaysa aqoonsiga al-Qudus ee caasimadda Israel, ayaa sidoo kale ugu baaqday kuwa ku lugta leh geeddi-socodka in ay ku hadlaan oo ay u dhaqmaan "si caqli leh," oo leh dareen masuuliyad.
Booqashada Abbas ee xarunta dhexe ee Midowga Yurub ee Brussels ayaa waxaa ay uga faa'iideysanayaan saraakiisha yurub iyo wasiirada arrimaha dibedda inay uga soo horjeestaan go'aanka Trump uu doonayo in safaaradda Mareykanka loo raro al-Qudus.
Kan-xigaCiidamada Masar oo xiray talyihii hor...
Kan-horeItoobiya: Dibadbaxyo looga soo horjee...
41,765,623 unique visits